कोरोनाबाट नेपालमा थप १ जनाको मृत्यु, ४ को अवस्था गम्भीर, कुन अस्पतालमा हुँदैछ उपचार ? — Imandarmedia.com
कोरोनाबाट नेपालमा थप १ जनाको मृत्यु, ४ को अवस्था गम्भीर, कुन अस्पतालमा हुँदैछ उपचार ?
काठमाडौं । कोरोना जोखिम न्यून भएको भन्दै केपी ओली सरकारले लक डाउन अत्य भएको घोषणा गर्यो। तर लकडाउन खुलेको २ दिन नबित्दै नेपालमा ३ जनाको कोरोनाबाटै मृत्यु भइसकेको छ ।
‘हाम्रो अस्पतालमा मृत्यु भएका एकजना पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ आएको छ, साउन ६ गते मृत्यु भएको थियो, ७ गते रिपोर्ट पोजेटिभ आयो,’ डा सिंहले भने, ‘उहाँको शव अस्पतालमै राखिएको थियो । कोरोना पोजेटिभ आएपछि अहिले आर्मीले शव व्यवस्थापन गर्दैछ ।’
डा सिंहका अनुसार मृतक पुरुषसँगै अन्य १७ जना व्यक्तिको पनि कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । १७ जना संक्रमितमध्ये एक जना नारायणी अस्पतालका र एक जना बाहिर कार्यरत चिकित्सक हुन् । सुख्खा बन्दरगाहका दुईजना स्टाफ, ट्रक चालक र एक निजी स्कुलका कक्षा १० का विद्यार्थी समेतमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
बुधबार साँझ संक्रमण पुष्टि भएका सबै जना क्वारेन्टाइनमा नबसेका व्यक्ति हुन् । नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार संक्रमित १७ जनामध्ये ९ जना पैसा तिरेर(सेल्फ पेड) परीक्षण गराएका र अन्य चिकित्सक सिफारिसमा परीक्षणका लागि आएका थिए । अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका ५ जनाको परीक्षण गरिएको हो ।
चिकित्सकका अनुसार भर्ना भएकाहरुमा कडा निमोनिया देखिएको छ । दुईजना यसअघिका संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका हुन् । ‘४ जना महिलासहित १७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ,’ डा.उपाध्यायले भने, ‘संक्रमित १७ जनामध्ये कोही पनि क्वारेन्टाइनका हैनन् ।’
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार ‘ट्राभल हिस्ट्री’बिनाका र कतिपय लक्षणसहितका संक्रमित समेत देखिएकाले निकै गम्भीर बन्नुपर्ने आवस्था सिर्जना भएको छ । ‘पेड टेस्ट’ सुरु नगरुन्जेल पर्सामा संक्रमित सबै निको हुँदै गएका थिए । नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा मात्र २ जना संक्रमित भर्ना थिए । तर, पेड टेस्ट सँगै विभिन्न व्यक्तिहरुले स्वेच्छाले जाँच गर्न थालेपछि कोरोना संक्रमित ठूलो संख्यामा देखापर्दै गएको छ । उनले भनेका छन् ।
‘बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका अगाडी भनेका छन्, ‘लकडाउनको अन्त्यसँगै सबैतिर भीडभाड हुनुले ठूलो खतरा निम्त्याएको छ । हामीहरु अहिले पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममै छौँ । तसर्थ भीडभाडमा नजाऔँ, स्वास्थ्य र सुरक्षाका सबै शर्त र मापदण्डको अनिवार्य रुपमा पालना गरौं ।’